नुवाकोट घटनाबारे जुहारी : तामाङ भन्छन्,‘चुनाव हार्ने डर महतले आफै एम्बुस राखिएको हुनसक्छ ।’ – www.janabato.com
नुवाकोट घटनाबारे जुहारी : तामाङ भन्छन्,‘चुनाव हार्ने डर महतले आफै एम्बुस राखिएको हुनसक्छ ।’
२ मंसिर २०७४, शनिबार ०८:०७ November 18, 2017 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो संवाददाता । मंसिर २, काठमाडौं । शुक्रबार विहान भएको बम विस्फोटनको घटनाका विषयलाई लिएर कांगे्रस उम्मेदवार डा. रामशरण महत र वाम उम्मेदवार हितबहादुर तामाङ वीच जुहारी चलेको छ ।
घटना लगत्तै कांग्रेस उम्मेदवार डा. महतले घटनाका दोष विप्लव नभई माके उम्मेदवार तामाङले गराएको भनेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै माके उम्मेदवार हितबहादुर तामाङले महतले आफै बम विस्फोट गराएको आरोप लगाएका छन् । महतले भनेका थिए, ‘मैले चुनाव जित्न लागें भनेर एम्बुस राखिएको हुनसक्छ ।’
यसका दुईटा कारण छन् भन्दै तामाङले भने, ‘एक, कांग्रेसको सभा हुने भनिएको चतराले जाने जुन मूल बाटो हो, त्यो प्रयोग नगरी सहायक बाटोबाट महत गएका छन् र त्यही सहायक बाटोमा माइन बिस्फोट भएको छ’ उनले भने ‘दुई, घटनामा मलाई दोष लगाइनु र वामगठबन्धनविरुद्ध भौतिक आक्रमणमा उत्रनुले पनि महतले नै नियोजित रुपमा घटना गराएको देखिन्छ ।’
← चुनावी प्रचार बोर्डमा छाडा शब्द लेखिएपछि..
लिबियामा मानव तस्करी भयावह : ४८ हजार रुपैयाँमा अझै बिक्री हुन्छन् दासहरु →
सरसफाईको अभियानलाई प्रत्येक टोल टोलमा पु¥याउनु पर्छ भुनपा नगर प्रमुख थापा
१९ मंसिर २०७५, बुधबार १३:३८ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on सरसफाईको अभियानलाई प्रत्येक टोल टोलमा पु¥याउनु पर्छ भुनपा नगर प्रमुख थापा
यसकारण घुम्नुपर्छ तानसेन बजार
२८ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०९:२५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on यसकारण घुम्नुपर्छ तानसेन बजार
१३ बैशाख २०७५, बिहीबार १४:२३ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on धर्मपुर माविमा रेडक्रसको नयाँ कार्यसमिति गठन